Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.4.1 Ny fisiana ara-zavatra
Ny fisiana ara-tsotra dia mety ho mahaliana raha mitambatra tsara tsara fanontaniana amin'ny angon-drakitra.
Na dia voarafitra amin'ny fiteny manjavozavo aza izy io dia maro ny fikarohana ara-tsosialy no manisa zavatra. Amin'izao vanim-potoana lehibe izao dia afaka manisa mihoatra noho ny hatramin'izay ireo mpikaroka, saingy tsy midika izany fa tokony hanomboka hanisa tsy misy hatak'andro izy ireo. Ny mpikaroka kosa dia tokony hanontany hoe: Inona avy ireo zavatra tokony hojerenao? Mety ho toy ny raharaha iray manontolo izany, saingy misy ny sasany amin'ireo rafitra ankapobeny.
Matetika ny mpianatra dia mandrisika ny fikarohana ataony amin'ny filazana hoe: Hiantehitra amin'ny zavatra tsy mbola nisy hatramin'izay. Ohatra, mety miteny ny mpianatra iray fa maro ny olona no nianatra ny mpifindra monina ary maro no nianatra kambana, saingy tsy nisy nianatra ny zandriny mpifindra monina. Raha ny zava-niainako, ity paikady ity, izay antsoiko hoe fanentanana amin'ny tsy fisiana , matetika dia tsy mitarika fikarohana tsara. Ny fanoloran-tena amin'ny tsy fisiana dia tahaka ny filazana fa misy lavaka any, ary handeha hiasa mafy aho hameno izany. Nefa tsy tokony ho feno ny lavaka rehetra.
Raha tokony handrisika ny tsy fisian'ny fotoana aho dia mieritreritra fa ny tetikady tsara kokoa dia ny mikaroka fanontaniana momba ny fikarohana izay tena manan-danja na mahaliana (na tsara indrindra ho azy ireo). Ireo teny roa ireo dia somary sarotra ny mamaritra, fa ny fomba iray hieritreretana ny fikarohana lehibe dia ny fiantraikany ara-drariny na famatsiana ho fanapahan-kevitra lehibe ataon'ny mpanao politika. Ohatra, ny fandrefesana ny tahan'ny tsy fananan'asa dia zava-dehibe satria endriky ny toekarena izay mitondra fanapahan-kevitra politika. Amin'ny ankapobeny, heveriko fa ny mpikaroka dia manana fahatsapana tsara ny zava-dehibe. Noho izany, mandritra ny ambiny amin'ity fizarana ity, dia hanome ohatra roa aho izay heveriko fa mahaliana ny fifantenana. Amin'ny tranga tsirairay, ireo mpikaroka dia tsy voamarina fa tsy mahagaga; Aleo izy ireo manisa amin'ny fomba manokana izay maneho ny hevi-dehibe amin'ny hevitra ankapobeny momba ny fomba fiasa ara-tsosialy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia maro ny zavatra mahaliana ireo fampihetseham-peo mahaliana ireo dia tsy ny angon-drakitra, fa avy amin'ny hevitra ankapobeny.
Ohatra iray amin'ny herin'ny fihoaram-pepika tsotra no avy amin'ny fandinihana nataon'i Henry Farber (2015) momba ny fitondran'ireo mpamily fiarakaretsaka New York. Na dia mety tsy dia mahaliana loatra ny vondron'antoko izany, sehatra fikarohana ara-tsiantifika iray ho an'ny fanandramana teoria roa mifanohitra amin'ny toekarena ara-toekarena. Ho an'ny tetik'asa fikarohana nataon'i Farber, dia misy lafiny roa manan-danja momba ny tontolo iainan'ny mpamily fiarakaretsaka: (1) ny karamany isan'ora dia miovaova isan'andro, mifototra amin'ny toe-javatra toy ny toetrandro, ary (2) ny ora Ny asa dia mety manovaova isan'andro noho ny fanapahan-keviny. Ireo singa ireo dia mitarika fanontaniana mahaliana momba ny fifandraisana eo amin'ny salan'isan'ny ora sy ora miasa. Ireo modely vaovao momba ny toekarena dia maminavina fa ny mpamily fiarakaretsaka dia hiasa bebe kokoa amin'ny andro izay ananany karama ambony indrindra. Na izany aza, ny modely avy amin'ny toekarena fitondrantena dia maminavina marina ny mifanohitra amin'izany. Raha mametraka loka fidiram-bola manokana ny mpamily - milaza ny $ 100 isan-andro - ary miasa mandra-pahavitan'ilay lozam-pifamoivoizana, dia hamarana ora vitsy kokoa ny mpamily rehefa mihaona. Ohatra, raha mpikaroka vondron'olona ianao, dia mety ho tapitra ny adiny efatra amin'ny andro tsara ($ 25 isaky ny ora) ary adiny dimy amin'ny andro ratsy ($ 20 isaky ny ora). Noho izany, moa ve ny mpamily no miasa ora maromaro amin'ny andro ambony amin'ny karama ambany kokoa (araka ny famariparitan'ireo modely tsy ara-dalàna) na ora maromaro amin'ny andro ambany karama ambany kokoa (araka ny nambaran'ireo modely ara-toekarena fitondran-tena)?
Ho valin'ity fanontaniana ity dia nahazo ny angon-drakitra i Farber tamin'ny isaky ny fiarakaretsaka nataon'ny mpitondra fiara New York City tamin'ny taona 2009 ka hatramin'ny 2013, angona misy ankehitriny. Ireo tahirin-kevitra ireo-izay nangonina tamin'ny metatra elektronika izay mitaky ny fampiasana taxi ny tanàna - dia ahitanao ny mombamomba ny fitsangatsanganana tsirairay: ny fotoana fanombohana, ny toerana fanombohana, ny fotoana farany, ny fijanonana farany, ny saran-dalana, ary ny fanolorana (raha ny karama dia karama amin'ny karatra fiarakodia) . Tamin'ny fampiasana angon-drakitra taxi no nahitan'i Farber fa ny ankamaroan'ny mpamily dia miasa bebe kokoa amin'ny andro ambony kokoa ny karama, mifanaraka amin'ny teôlôjika tsy kristiana.
Ankoatra io fikarohana fototra io, i Farber dia afaka nampiasa ny habetsaky ny angon-drakitra mba hahatakarana bebe kokoa ny heterogeneity sy ny dinamika. Hitany fa, rehefa mandeha ny fotoana, ireo mpamorona vaovao dia mianatra tsikelikely hiasa ora maromaro amin'ny andro ambony (ohatra, dia mianatra ny hitondrany toy ny modely tsy ara-pahaizana). Ary ireo mpamily vaovao izay manana fitondrantena toy ny mpilatsaka an-tsitrapo dia mety hijanona amin'ny hoe mpamily fiarakaretsaka. Ireo fikarohana roa ireo, izay manampy amin'ny fanazavana ny fitondran-tenan'ireo mpamily ankehitriny, dia azo atao noho ny haben'ny daty. Tsy afaka nahita azy ireo tamin'ny fandalinana teo aloha izy ireo izay nampiasana taratasy taratasy fandehanana taratasy avy amin'ny mpamily fiarakaretsaka madinika nandritra ny fotoana fohy (Camerer et al. 1997) .
Ny fandalinana an'i Farber dia teo akaikin'ny tranga iray farafahakeliny ho an'ny fikarohana izay mampiasa loharanom-baovao lehibe satria ny angon-drakitra nangatahin'ny tanàna dia tena akaiky ny angon-drakitra nangatahin'i Farber (fahasamihafana iray ny hoe ny Farber dia naniry ny data amin'ny total karama fanampiny-toro-hevitra fa ny toro-làlana momba ny tanàna dia misy toro-làlana ihany karama amin'ny karatra famoahana). Na izany aza, tsy ampy ny data. Ny fanalahidin'ny fikarohana nataon'i Farber dia niteraka fanontaniana mahaliana momba ny angon-drakitra, fanontaniana iray izay misy fiantraikany lehibe kokoa noho io sehatra manokana io.
Ohatra iray hafa amin'ny fanisana ny zavatra avy amin'ny fikarohana nataon'i Gary King, Jennifer Pan, sy Molly Roberts (2013) momba ny sivana an-tserasera nataon'ny governemanta Shinoa. Tamin'izany tranga izany, ireo mpikaroka dia tsy maintsy nanangona ny angon-drakiny manokana ary tsy maintsy niatrika ny tsy nahatanterahan'izy ireo ny angon-dry zareo.
Ny King sy ny mpiara-miasa dia nandrisika ny famoahana ny haino aman-jery sosialy ao Shina amin'ny alàlan'ny fitaovam-panjakana lehibe izay heverina ho anà olona an'arivony. Ny mpikaroka sy ny olom-pirenena anefa, dia tsy mahatsapa loatra ny fomba hanapahan'ireo sivana ireo izay votoaty tokony hofafana. Ireo manam-pahaizana ao Shina dia tsy mifanohitra amin'ny zavatra andrasana momba izay karazana hafatra izay mety ho voafafa. Ny sasany mihevitra fa mifantoka amin'ireo lahatsoratra manakiana ny fanjakana ny sivana, raha ny hafa kosa mieritreritra fa mifantoka amin'ny hafatra izay mamporisika ny fitondran-tena iombonana, toy ny fihetsiketsehana. Raha manazava hoe iza amin'ireo fanantenana ireo dia misy fiantraikany amin'ny fahazoan'ny mpikaroka an'i Shina sy ireo governemanta hafa mpitondra fifehezana ny sivana. Noho izany, ny mpanjaka sy ny mpiara-dia dia te-hampitaha lahatsoratra navoaka ary nofafany avy eo tamin'ny lahatsoratra izay navoaka ary tsy nofafana mihitsy.
Tamin'ny fotoana nanatontosana io asa goavana be io, ny mpanjaka sy ny mpiara-miasa dia nahazo lahatsoratra 11 tapitrisa teo amin'ny lohahevitra 85 voasolo samihafa, samy manana ny hevi-pitenenany. Ohatra, lohahevitra momba ny fahatsapana avo dia i Ai Weiwei, ilay mpanakanto mpanohitra; Ny lohahevitra momba ny fahatsapana antenaina dia ny fankasitrahana sy ny famoahana ny vola Shinoa, ary ny lohahevitra momba ny fahatsapana ambany dia ny mondialy. Amin'ireo lahatsoratra 11 tapitrisa ireo, dia 2 tapitrisa no sivana. Somary mahagaga ihany, ny Mpanjaka sy ireo mpiara-miasa nahita fa ny lahatsoratra momba ny lohahevitra sarobidy dia nosivanina kely fotsiny noho ireo lahatsoratra momba ny lohahevitra midina sy ambany. Amin'ny teny hafa, ny sivana Shinoa dia mety hanivana lahatsoratra iray izay manonona an'i Ai Weiwei ho lahatsoratra iray mitantara ny fiadiana ny amboara eran-tany. Ireo fanadihadiana ireo dia tsy manohana ny hevitra hoe ny governemanta dia manivana ny lahatsoratra rehetra momba ny lohahevitra sarotra.
Ity fanodin-kevitra tsotra amin'ny sivana tsotra amin'ny lohahevitra ity dia mety hamitaka. Ohatra, mety hanivana ireo lahatsoratra izay manohana an'i Ai Weiwei ny governemanta, saingy mamela lahatsoratra izay manakiana azy. Mba hanapariahana kokoa ireo lahatsoratra dia nila nandinika ny fihetseham - pon'ny lahatsoratra tsirairay ny mpikaroka. Indrisy anefa, na dia betsaka aza ny asa, ny fomba fanitsiana tanteraka ny fahatsapan-tarehy amin'ny fampiasana rakibolana efa misy dia mbola tsy tsara amin'ny toe-javatra maro (eritrereto ny olana izay mamorona fotoam-pihetseham-po ara-pihetseham-po tamin'ny 11 septambra 2001 voalaza ao amin'ny fizarana 2.3.9). Noho izany, ny Mpanjaka sy ny mpiara-dia dia nila nanamboatra ny 11 tapitrisa amin'ny media sosialy 11 mijery raha toa izy ireo (1) mitsikera ny fanjakana, (2) manohana ny fanjakana, na (3) tsy misy dikany na tatitra mahakasika ny zava-misy. Toa toy ny asa goavana izany, saingy nanampy azy io tamin'ny fampiasana trosa mahery iray izay mahazatra amin'ny siansa informatika saingy tsy dia fahita firy amin'ny siansa sosialy: ny fianarana manara-maso ; jereo ny sary 2.5.
Voalohany, tamin'ny dingana iray izay nantsoina hoe fialan-tsasatra , ireo mpikaroka dia namadika ny lahatsoratra sosialy ho an'ny tahirin-drakitra ara-taratasy , izay misy andalana iray ho an'ny tahirin-kevitra tsirairay sy ny tsanganana iray izay nanoratana raha misy teny manokana (oh: hetsi-panoherana na fifamoivoizana) . Avy eo, vondrona mpikaroka momba ny fikarohana dia nanamarika ny fihetseham-pon'ny lahatsoratra iray. Avy eo dia nampiasa io angon-tanana io izy ireo mba hamoronana modely fianarana milina izay mety hahatonga ny fihetseham-po amin'ny lahatsoratra mifototra amin'ny toetrany. Farany, nampiasa an'io modely io ry zareo mba hanombanana ny fihetseham-pon'ny lahatsoratra 11 tapitrisa.
Noho izany, toy ny famakiana sy famaritana mari-pamantarana 11 tapitrisa - izay mety tsy ho azo tanterahana - ny King sy ny mpiara-miasa dia nanamarika andian-tsoratra maromaro ary avy eo dia nampiasa fianarana voamarina mba hanombanana ny fihetseham-pon'ny lahatsoratra rehetra. Taorian'ny fitrangan'ity fanadihadiana ity dia afaka nanatsoaka hevitra izy ireo fa somary mahagaga ny mety hisian'ny lahatsoratra iray nofafana raha tsy misy ifandraisany amin'ny fanjakana na fanohanana ny fanjakana.
Sary 2.5: Famintinana ny fomba fampiasa nampiasain'ny King, Pan, and Roberts (2013) mba handinihana ny fihetseham-pon'ny haino aman-jery sosialy 11 tapitrisa Shinoa. Voalohany, tamin'ny dingana efa nomanina mialoha ny mpikaroka, dia nanova ny hafatra sosialy ho an'ny matin'ny antotan-taratasy (jereo Grimmer and Stewart (2013) ho an'ny fampahalalana bebe kokoa). Faharoa, notazonin'izy ireo ny fihetseham-pon'ny santionany amin'ny lahatsoratra. Fahatelo, nampiofana modely fianarana voamarina izy ireo mba hametrahana ny fihetseham-pon'ny lahatsoratra. Fahaefatra, nampiasa ny modely fianarana voamarina izy ireo mba haminaniany ny fihetseham-pon'ny lahatsoratra rehetra. Jereo ny King, Pan, and Roberts (2013) , appendice B ho fanazavana amin'ny an-tsipiriany bebe kokoa.
Farany, ny mpanjaka sy ny mpiara-miasa dia nahita fa karazana lahatsoratra telo ihany no nosivanina matetika: pôrnôgrafia, fanakianana sivana, ary ireo izay nanana tetik'asa iombonana (izany hoe ny mety hisian'ny hetsi-panoherana goavana). Tamin'ny fandinihana lahatsoratra maromaro nopotehana sy lahatsoratra izay tsy nofafana, dia afaka nianatra ny fomba fiasan'ny sivana amin'ny fijerena sy fanisana ny Mpanjaka sy ny mpiara-miasa. Ankoatra izay, manoloana lohahevitra iray izay hitranga manerana an'ity boky ity, ny fomba fianarana manara-maso izay nampiasainy - ny fametrahana mari-pamantarana ny vokatra sasany ary ny fanorenana modely fianarana milina hanamarihana ny sisa dia lasa mahazatra tokoa amin'ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika . Hahita sary mitovy amin'ny tarehimarika 2.5 ao amin'ny toko faha-3 ianao (mametra-panontaniana) ary 5 (Famoronana fiaraha-miasa betsaka); Ity dia iray amin'ireo hevitra vitsivitsy izay miseho ao amin'ny toko maromaro.
Ireo ohatra ireo-ny fitondrantenan'ny mpamily fiarakaretsaka ao New York sy ny fitondran'ny sivana ataon'ny governemanta Shinoa-maneho fa ny fanisana tsotra amin'ny loharanom-baovao lehibe dia mety hitarika amin'ny fikarohana mahaliana sy manan-danja. Na izany na tsy izany, ireo mpikaroka dia mila mametraka fanontaniana mahaliana amin'ny loharanom-baovao lehibe; Tsy ampy ny angon-drakitra.